Yaa loo Magacaabay Laacibka BISHA ee Premier League? – Gool FM
Byare December 12, 2018
(England) 12 Dis 2018. Xiddiga ay falka Cunsurinimada ah kula kaceen taageerayaasha Chelsea ciyaartii ay dhawaan ka adkaadeen Manchester City ee Raheem Sterling ayaa loo Magacaabay laacibka bishii la soo dhaafay ee November.
Wiilka reer England ayaa sameeyay saddex caawin ah isagoona dhaliyay saddex gool.
Sterling ayaa sameeyay labo caawin ah isla markaana dhaliyay labo gool kulankii ay Man City 6-1 uga adkaatay Southampton.
Sidoo kale gool ayuu dhaliyay caawina wuu sameeyay dheeshii ay kooxdiisu ka adkaatay West Ham.
Abaal marinta laacibka bisha ayuu ku garaacay Saaxiibadiisa Leroy Sane iyo David Silva iyo waliba Moussa Sissoko (Tottenham), Lucas Digne (Everton), Andy Robertson (Liverpool) iyo Felipe Anderson (West Ham).
Liverpool oo si rasmi ah u shaacisay in Matip uu mari doono qaliin iyo mudada uu garoomada ka maqnaandoono oo lasii ogaaday
Xulka qaranka Soomaaliya oo xasuuqay Jabuuti xilli uu SADDEXLEEY dhaliyay Feysal...+SAWIRRO